ClearSlide: Ngosiputa ihe ngosi maka ire ahia | Martech Zone
Dika nyocha emere Forrester, Pasent 62 nke ndị isi ahịa chọrọ nwekwuru visibiliti n'ime ọrụ ahịa, na ọ bụ nanị pasent 6 nwere obi ike na ha na-enweta nghọta ziri ezi. N'ihi ya, ndị isi ahịa na-agbasi mbọ ike ịghọta ihe ndị na-emegharị, otu, na ọdịnaya dị irè n'ezie na usoro ahịa ahụ - ọbụlagodi ruo mgbe e meriri ohere ma ọ bụ furu efu.
ClearSlide, A na-erere ikpo okwu na-egosi ire ere, ewepụtala njikọ aka na soro, ihe ohuru nke na enyere ndi ahia aka ileba anya, nyocha, na ime ihe ngosi banyere oru.
Ndị isi ahịa na-eji ClearSlide Njikọ aka na Soro nyochaa mpaghara ahịa dị oke egwu:
Ihe Ahịa - Enwere ike ime ka ndị ahịa mara ọkwa mgbe ndị nnọchi anya nwere nzukọ ahịa na mgbe ha zipụrụ ozi ịntanetị ndị ahịa, na-eleba anya n'ihe eji ekpuchi ihe. Nke a nwere ike inye aka na nkuzi ha na ndị njikwa na ndị isi ma nyere aka ịmata ihe na-arụ ọrụ yana ebe ha na-egbochi ụzọ iji gaa n'ihu ahịa.
Agementzụ ahịa - Nchịkwa ahịa nwere ike ịhụ otu akụkọ si aza ọdịnaya. Mgbe ha na-agbaso akụkọ, ha na-enweta amamọkwa ozugbo mgbe emepere ọdịnaya na oge ole ndị ahịa na-etinye na itinye aka. Maka nzukọ ịntanetị, ClearSlide na-agbakọ otu esi etinye aka ma ọ bụ dọpụ uche onye ọ bụla bịara ya na ọkwa slide-by-slide. A na-achịkọta data a ka ọ bụrụ nkwenye ndị ahịa zuru oke, nke enwere ike ịkọwapụta n'ofe ndị ọzọ ndị ahịa na-arụ ọrụ.
content - Nchịkwa ahịa nwere ike ịlele ahịa na azụmaahịa jikọtara ya na ọkwa kachasị elu. Ha nwere ike ịkụziri ndị na-ere ahịa ka ha jiri ọdịnaya kacha mma ma hazie ahịa iji bulie ozi.
Njikọ aka na Soro ga-enyere ndị isi ahịa aka iru ọganihu na-aga n'ihu na nzukọ ha. Anyị mere ngwá ọrụ a iji nye ndị isi ahịa ihe ngosi ha chọrọ iji gbanwee usoro ahịa dabere na data siri ike. Iji njikọ aka na Soro, ụlọ ọrụ ahịa ga-enwe ike iji oge ha na oge ndị ahịa ha mee ihe kachasị mma. Raj Gossain, VP nke Ngwaahịa, Clearslide.
Ihe ikpo okwu ClearSlide na-enye ndi ndu ahia ihe omuma nke ezigbo ndi otu ha ma na enye omimi nchịkọta banyere ụdị ọdịnaya nke kachasị emetụta ndị ahịa. Maka ndị ọrịre ahịa, ClearSlide na-enye ohere maka nnwekọ nkwukọrịta n'etiti ndị ahịa na atụmanya, ma na ntanetị ma ọ bụ na mmadụ, na-eji ClearSlide web-based ma ọ bụ ngwa mkpanaaka.
Tags: kpochapụnjikọ aka-esoikpo okwu ngosintinye akaonye ndu ahianjikwa ahia